Omnify: Ndenye Ntanetị, Ntinye akwụkwọ, na Paykwụ Platgwọ Platform | Martech Zone
Ọ bụrụ na ị bụ mgbatị ahụ, ụlọ ihe nkiri, onye nkuzi, onye nkuzi, onye nchịkwa, ma ọ bụ ụdị azụmaahịa ọ bụla ebe ịchọrọ iwepụta oge, were ịkwụ ụgwọ, jikwaa ihe ncheta ndị ahịa, ma gwaa ndị ahịa gị onyinye, Omnify bụ ebumnuche e wuru maka ya. azụmahịa gị chọrọ… ma ị dabere na ọnọdụ gị ma ọ bụ azụmaahịa dị n'ịntanetị.
Sistemụ Ndozi Omnify
Nabata ntinye akwụkwọ, ịkwụ ụgwọ & Jikwaa Waitlists site na web na mobile. Mepụta oghere nke oghere dị site na ụbọchị, oge nchekwa, belata ọnụ ọgụgụ ndị bịaranụ, nye ndị otu ohere na ndị ọzọ na Omnify. Ọzọkwa, mee ka ndị bịara gị kweta na ‘Liability Waiver’ tupu ha emechaa ndoputa ha.
Omnify Atụmatụ Gụnye:
Otu ma ọ bụ Multi-Location - Mepụta akaụntụ dị iche iche maka ọnọdụ nke ọ bụla, nwee otu ndị ọrụ ahụ ịnweta ọtụtụ ebe, nwee ngwugwu klaasị na ndị otu kesara n'ụzọ ịchọrọ ka ha bụrụ.
Kalenda Ndị Ọrụ na Usoro ulingntanetị - lelee ma jikwaa usoro oge ọ bụla, jikwaa ndị bịara ya, ma nyere ndị ahịa ohere ịtọgharịa ma ọ bụ kagbuo ka achọrọ. Omnify na-enye ndepụta ndenye iji gwa ndị ahịa mgbe oghere mepere n'ime oge ndị ọrụ. Omnify na-emekọrịta na kalenda Google!
Ntinye akwụkwọ na ịkwụ ụgwọ - Nabata ịkwụ ụgwọ n'aka ndị ahịa gị site na iji ọnụọgụ nhọrọ ọnụọgụ abụọ ịkwụ ụgwọ PCI. Atụmatụ gụnyere ịkwụ ụgwọ ugboro ugboro, kwụọ ụgwọ mgbe e mesịrị, POS n'ihu oche, na njikọ ịkwụ ụgwọ maka email na SMS.
Nkwupụta ego na nchịkọta - Sochie na ịzụrụ ndị ahịa ịzụrụ, ntinye akwụkwọ, obibi, ịkagbu ya, nkwụghachi ya, na ego ndị a tụrụ aro iji nọrọ n’elu azụmaahịa gị.
Njikwa otu - Tinye ma wepu ndị ọrụ gị, jikwaa ikikere ha, mekọrịta kalenda ha, ma gwa ha na ndenye akwụkwọ ọhụrụ ma ọ bụ kagbuo ya na ihe ncheta email.
Marketing - Hazie ma hazie ozi ịntanetị na-enye ego, ncheta, na arịrịọ nzaghachi. Omnify jikọtara ya na Zapier iji mekọrịta ndị ahịa gị na ihe omume na nyiwe ahịa nke mpụga.
Mobile App - Omnify Gaa, ngwa mkpanaka maka Omnify bụ ụzọ kachasị mfe iji lelee usoro ihe omume gị na ndị bịara ya. Lelee ha ma jiri otu mgbata pịa ọzọ. I nwekwara ike izipu ozi ngwangwa, kpọọ oku, ma ọ bụ zitere ha ozi ozugbo na ngwa ahụ!
Mwepụ - Mepụta ngwa nnyefe dijitalụ ma nweta nkwenye n'aka ndị ahịa gị. Waiver ọ bụla aka ga-azọpụta gị oge, mgbalị, na ego karịrị njikwa na ịchekwa akwụkwọ iwepụ akwụkwọ. Nke a dị mkpa ugbu a dịka a na-ahapụ ụlọ ọrụ azụmaahịa mepere emepe yana mgbochi n'okpuru ọrịa na-efe efe.
WordPress Nkwụnye - Malite ire ozugbo site na blọọgụ WordPress gị ma ọ bụ weebụsaịtị yana Omnify's WordPress Plugin nke na-enyere usoro wijetị ka etinye ya n'otu akụkụ.
Nnabata Migration - Megharia ndị ahịa gị na ndenye akwụkwọ dị ugbu a site na ntinye akwụkwọ ntinye akwụkwọ gị, bulite data gị, ma zipụ ozi ịntanetị ndị ahịa gị.
Bido Nnwale Ọnwụnwa Free gị
Ngosi: Abụ m Mgbakwunye maka Kwado.
Tags: nhaziegokalenda googleọtụtụ-ọnọdụkalenda onlinendoputa ntanetionline ndoputa usoronhazi oge n'ịntanetịnkwụghachinkwụghachindoputaanwu anataraịgbagharaWordPresswordpress ntinye akwụkwọ ngwa mgbakwunyewordpress pluginndoputa ndoputa